बिहानपख दुई घण्टा बढी सुत्दा दिमाग दुईगुणा बढी एक्टिभ | Kendrabindu Nepal Online News
बिहानपख दुई घण्टा बढी सुत्दा दिमाग दुईगुणा बढी एक्टिभ
३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:१०
मानव जीवनमा निद्रा नभई नहुने कुरा हो। तर, बढी निद्रा पनि स्वास्थ्यका लागि घातकसावित बन्छ।
त्यसैले निद्राको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। तर, अचेलको व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले निद्राको सन्तुलन मिलाउन सकिरहेका छैनन्। केही मानिस त साना झप्कीमै निद्रा पूरा गर्छन् । केही अन्य चाहिँ हप्तामा एक दिन छुट्टी हुँदा दिनभरि सुत्छन् ।
एक अनुसन्धान अनुसार बिहानपख दुई घन्टा बढी सुत्दा दिमाग दुईगुणा बढी चल्ने देखिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, २० मिनेट बढी सुत्ने मानिस पातला हुन्छन् । बढी सुत्दा शरीरको क्यालोरी डढ्छ अनि तौल बढ्न पाउँदैन । अलि बढी सुत्दा शरीरमा कार्बोहाइड्रेट्सको मात्रा घट्छ जसले गर्दा शरीरका कोशिकाहरूले झन् बढी काम गर्छन् । टन्न सुत्दा तपाईंले दिनमा कम्तीमा ३८५ क्यालोरीयुक्त भोजन गर्न सक्नुहुन्छ । अनि यसले गर्दा शरीरलाई मह, चिनी, सिरप र फल जस्ता कुरा पचाउन सहायता पुग्छ ।
नियमित समयभन्दा २० मिनेट बढी सुत्दा ठूलालाई मात्र नभई बच्चाहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । एजेन्सी
Prevपाँच वर्षीया बालिका बलात्कृत
प्रहरीले नै ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेपछि…Next
आठ घण्टाभन्दा कम सुत्नु हुन्छ ? यस्तो रोग लाग्ला नि !
जिन्दगीको यस्तो सत्य, जसको जबाफ विज्ञानसँग छैन
गहिरो निन्द्रा पाउने यी सूत्र
सुत्नुअघि यी ७ कुरा नगर्नुस् । तौल बढ्छ